Aterineto misy fefy: fijery avy ao Pakistàna · Global Voices teny Malagasy
Tsy mahaliana mpanao gazety sy mpikatroka ny sehatra anaty aterineto
Voadika ny 06 Desambra 2020 9:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, English, Ελληνικά, Nederlands, English
Sary: Nick Youngson tao amin'ny Pcipedia.org (CC BY-SA 3.0).
Lahatsoratra nosoratan'i Farieha Aziz, mpiara-manorina ny Bolo Bhi, vondrona mpiaro ny zo nomerika, .
Ao Pakistàna, ny media sôsialy lasa tany fiadiana ho an'ny resaka fampahalalambaovao ao amin'ny politikam-paritra sy ny politika nasiônaly.
Efa hitantsika tao amin'ny Twitter ny fampielezankevitra handisoana vaovao ampidirina avy any ivelany, sy ny tsindry mavesatra ataon'ny fanjakana amin'ireny sehatra ireny mba hanitsiany ny politikam-pandrindràna ao amin-dry zareo hifanaraka amin'ny an'ny fanjakàna. Nisy ireo fepetra vaovao maneritery sy vao mainka nanenjana azy io hikendrena ny fitenenana, ary hatramin'ny fandraràna ireo sehatra, ary famerenana ny fahafahan'izy ireny hidirana rehefa manaraka fotsiny ny fitsipika ry zareo. Nisy ny tranga nahitàna pôlitisiàna, mpikatroka ary mpanao gazety nianjadian'ny fampielezankevitra voarindra nanaovana ho lasibatra ny hetsika an-tambajotran-dry zareo noho ny filazàna fa hoe nanitsakitsaka ny fitsipiky ny sehatra media sôsialy nisy azy, izay mety mitondra mankany amin'ny fampiatoana ny kaontin-dry zareo na fanakatonana mihitsy. Izany rehetra izany dia fanampin'ny filàmbaniny sy ny teritery efa an-taona maro natrehan'ireo mpanao gazety, mpikatroka, avara-pianarana, mpikarakara sy mpandray anjara amin'ireo diaben'ny vehivavy, ary ireo vitsy an'isa ara-pinoana ao Pakistàna. Amin'izao fotoana izao io filàmbaniny io dia atosiky ny tenifototra ety anaty tambajotra, nefa sady arahan'ny mety ho mbola tena hisian'ny herisetra. Ao anatin'izany fifandroritana izany, eo amin'ny fanjakàna sy ireo sehatra anaty aterineto, mazàna no lasa anjorom-bàla ny tombontsoan'ireo mpampiasa.
Isaky ny mahita marimaritra iraisana amin'ny fanjakàna ireo orinasa mba hitazonana ny fiodinan'ny tolotra omeny, no sady mandresy lahatra hoe ho tombontsoan'ny mpampiasa ny zavatra ataon-dry zareo, dia efa manohintohina ireo ezaka ataon'ny mpisolovava ao an-toerana izany, izay mikendry ny hamorona resaka mifototra amin'ny zo nomerika momba ny fitsipi-dalao manery ireo orinasa sy ny fanjakana mba hanome tamberinandraikitra. Miankina amin'ny isan'ireo mpampiasa azy ny lazan'ny sehatra anaty aterineto ao amin'ny faritra iray. Mba ho afaka manao fampakàrana amin'ny maha-tsena fampiasambola azy ny rafitra iray, dia mbola manana lanja ihany koa ny isa. Ireo mpampiasa ilay sehatra no mitàna izay anjara asa izay, izay samy mahazo tombony amin'izany na ilay orinasa na ny fanjakàna. Saingy rehefa momba izay azo na tsy azo jerena ao amin'ilay sehatra no resahana, votoaty toy inona no raràna, satria nahoana, amin'ny alàlan'ny dingana manakory, ary inona no làlana azon'ireo mpampiasa aleha mba hilàny vonjy, ireny dia fanapahankevitra samirery raisin'ny orinasa na ny fanjakàna, na niraisan'ireo orinasa sy ny fanjakàna. Tsy heverina ho toy ny mpiara-mitantsoroka voalohany miaraka amin'ireo orinasa sy ny fanjakana ny mpampiasa aterineto, rehefa misy fanapahankevitra tokony horaisina.
Nandritra ny taona marobe ireo fiarahamonina sivily ao Pakistàna no efa nitolona nanohitra ny lalàna famoretana sy ireo hetsiky ny fanjakana mamepetra ny fahalalahana miteny. Saingy ankehitriny, miteraka ahiahy ny fomba ampiharin'ireo orinasa handrafetana sy hampiharana ny fenitra ara-piarahamonina ao aminy, toy ireo lalàna sy rafitra napetraky ny governemanta amin'ny resaka sivana ihany mba haneriterena ny fahalalahana miteny. Mivandravandra be fa na ireo fitarainan'ny mpampiasa mifandraika amin'ireo fenitra na fepetra ara-piarahamonina, na ireo dingana fankatoavana ny “fangatahana araka ny lalàna” avy amin'ny governemanta mba hanaisorana votoaty na hampiatoana kaonty, samy misy fiantraikany goavana daholo amin'ny fanehoankevitra. Mila ifantohan'ny saina tsara mihitsy ny hoe mety hiteraka inona ireny rafitra fandrindràna votoaty ireny, tafiditra amin'izany ny fomba nandraisana ny fanapahankevitra, ary ny fanontaniana hoe iza no mandray fanapahankevitra, sy tokony ho ry zareo sa tsy zareo no nandray voalohany ireny fanapahankevitra ireny. Nefa na eo aza ny lanja mavesatr'ireo fanapahankevitra noraisin'ireo sehatra, mbola mitoetra hatrany ny tsy fisian'ny mangarahara.
Nandritra ny Vovonana 2015 RightsCon, notakian'ireo fikambanana avy amin'ny fiarahamonina sivily ny hisian'ny tatitra mangarahara bebe kokoa ataon'ireo sehatra an-tambajotra. Mivaky toy izao ny fanambaràna:
…Noho ny tsy fisian'ny fanamarinana bebe kokoa an'ireo rakitra avoaka, ary ny fahazavan'ny dingana arahan'ireo orinasa entiny hamaritana raha ara-dalàna ny fangatahana iray na nataona antokon-draharaha ara-dalàna, sy ny fomba nandraisana ny fanahapankevitra hameperana ny votoaty, voafetra be ny fanomezana tatitra araka ny tokony ho izy ho an'ireo mpampiasa aterineto, mpikaroka, mpanao gazety ary ireo mpisolovava.
Mba ho mangarahara misy dikany sy misy ilàna azy, tsy maintsy asiana tarehimarika sy sokajy maromaro kokoa ao anatin'ireo tatitra. Ny taona 2020, tsy mbola tratrantsika io.
Arakaraky ny hidiran'ireo orinasa eo amin'ny tsena manerana ny tany sy, etsy andaniny, anatina fepetran-dalàna tsy mitovy, mitarika andiana faneriterena amin'ny resaka fahalalahana maneho hevitra ny fampanajàna sy ny fampiharana ny lalàna eo an-toerana. Efa tena zavamisy iainana izao ny tsy fanekena sy izay noheverina ho fandrahonana tany aloha ho an'ny aterineto tsy voafetran-tsisintany. Ao anatin'ny vanimpotoanan'ny aterineto misy fefy isika izao.
Amin'ny ankapobeny dia sokajiana anaty tatitra mangarahara ireo fitakiana / fangatahana avy amin'ny fanjakàna, kanefa, raha toa ny endriky ny votoaty na ireo kaonty voatily ao anatin'ireo fangatahana ka nanitsakitsaka ny fepetran'ny orinasa, dia voatelina ao anatin'ny sokajin'ireo tatitra izay miresaka ireo hetsika rehetra noraisin'ny orinasa iray ho fampanajana ny fepetra manokany izy ireny. Ny tsy voaray tanaty kajikajy tamin'io dia ny fananan'ireo mpanaramaso avy amin'ny fanjakàna loharano misimisy kokoa eo am-pelatanany raha oharina amin'ireo olontsotra tsy miankina, ho entina mitsikilo sy manao tatitra momba ny votoaty. Raha tsy sokajiana mitokana ireo fangatahana rehetra ataon'ny fanjakana na dia tafiditra anatin'ireo fepetra fandrindràna ny tolotra aza, tsy hisy mihitsy ny fomba hamaritana ny haben'ny fangatahana ataon'ny fanjakana sy ireo mpanaramaso, izay tondro iray amin'ny laharam-pahamehana ho azy ireo sy fomba iray hanerena azy hanome tamberinandraikitra amin'ny nampiasàny ny fahefana teo an-tànany.
Aiza ho aiza no misy ireo mpampiasa farany ao anatin'ny lalaon'ireo orinasa te-hikolokolo sy te-hitazona ny vovonany hihodina hatrany, ary ireo andrana ataon'ny fanjakana hametrahana fanarahamaso araka izay tratra amin'izy ireny? Ao Pakistàna, toa tsy manao afa-tsy ny manasarotra ny raharaha raha ireo fepetra vao navaozina tsy ela akory sy nankatoavina – saingy tsy tsy nasiana fanatsaràna―Fanesorana sy Fibahanana ireo Votoaty Tsy Manaraka ny Lalàna (dingana fanarahamaso ary fiarovana), 2020. Manoloana ny fanoheran'ireo mpiaro zo nomerika ao an-toerana sy ireo sehatra vahiny tamin'ny alàlan'ny Asia Internet Coalition (AIC), notakian'ilay dika tany am-piandohana tamin'ireo Fepetra ny hanesorana sy ny hametrahan'ireo sehatra ireo ao anatin'ny fotoana fohy ny fameperana votoaty. Miteraka fandoavana sazy ara-bola sy fandraràna ny tolotra ny tsy fanekena ireny fepetra ireny. Tamin'ny lohataona, namoaka tenimita ny mpandrindra,araka ny Toko faha-37 ao amin'ny Lalàna 2016 ho Fisorohana ny Heloka Bevava ampiasàna fitaovana Elektrônika ary nanakana fampiasa marobe toy ny Bigo, TikTok, Skout, SayHi, Tagged, Grindr ary Tinder, fa namerina fotsiny ny fahafahana miditra amin'izy ireny rehefa neken'ireo orinasa ny hampifanaraka ny pôlitika fandrindràna votoaty ao amin-dry zareo amin'ny dika iray neken'ny eo an-toerana, neken'ny manampahefana pakistaney misahana ny fifandraisana. Heverin'ireo tatitra am-baovao fa tsy dia nivoatra nankaiza akory ireo Fepetra ― ny 18 Novambra 2020 vao nisy ny dika azon'ny daholobe noraisina.
Tafahitsoka teo anelanelan'ny fanararaotam-pahefan'ny governemanta sy ny faneken'ireo orinasa, hiroso maty raibe, hihemotra maty renibe ireo mpampiasa. Lasa tena feno teritery ho azy ireo ny fitetezana ireo sehatra anaty aterineto. Na izy ireo voahilika tanteraka, na voatery manaraka ny lalaon'ireo mpitazana am-pahanginana fa tsy ho mpandray anjara mavitrika intsony. Ankoatra ireo izay mirotsaka amin'ny familiviliana, fandisoambaovao ary fanararaotana, vetivety dia very ny zava-mahaliana tamin'ireo sehatra anaty aterineto, indrindra fa ho an'ireo mpanao gazety sy mpiaro zon'olombelona. Tsy maintsy mitady vahaolana amin'io ry zareo, amin'ny fanapariahana ireo loharano ilaina mba hahatakarana sy hiatrehana ireo olana sedrain'ny mpampiasa aterineto, fa tsy ny hanamora ny asan'ny fanjakana mihoatra noho izay efa ataon-dry zareo amin'izao fotoana izao.
Ity dia tatitra nomanina ho ampahany amin'ireo andiana lahatsoratra avy amin'ny Hetsiky ny Sekoly Fianarana Lalàna Wikimedia/Yale momba ireo Mpanelanelana sy ny Vaovao, mba handraketana ireo fomba fijery marobe momba ny fiantraika erantanin'ireo fanapahankevitra momba ny fandrindrana votoaty ety anaty sehatry ny aterineto. Afaka ataonao ny mamaky ireo lahatsoratra rehetra anatin'ireo andiany ao amin'ny bilaogin-dry zareo, na ao amin'ny fahana Twitter-ndry zareo @YaleISP_WIII.
Tantaran'ny Fandrahonana-lalàna farany
Rosia 30 Aogositra 2019